APPLE TREE SPAS: SHARAXAADA KALA DUWAN IYO SAWIRKIISA, ASTAAMAHA IYO ASTAAMAHA, FAAHFAAHINTA BEERASHADA - BEERTA
Qaar ka mid ah noocyada kala duwan ee xagaaga ee tufaaxa leh difaaca wanaagsan - Apple Spas
Kala duwanaanta Apple waa mid ka mid ah kuwa ugu badan guulaha casriga ah ee taranta.
Tani waa triploid, xagaaga, kala duwanaansho sare.
Jihada ah ee noocyada triploid taranta waa mid cusub, ma aha wax ka badan toban sano jir.
Dhirta Apple ee noocyo noocan oo kale ah saddexda nooc ee koromosoomyada, si ka duwan caadiga ah - diploid.
Midabkooda way ka weyn yihiin kuwa caadiga ah waxayna muujiyaan iska caabin aad u wanaagsan si ay u noqoto cuduro badan. Sharaxaad faahfaahsan iyo sawirada maqaalkan.
Waxyaabaha kala duwan ee xagaaga ee tufaaxa. Maanta maanta jinsiyadaha Ruushka ah waa la duubay qiyaastii 20 noocyo soodhaweyn ah.
Kuwaas oo lix ka mid ah ayaa horay u maray tijaabooyinka lagama maarmaanka ah waxaana lagu soo daray Diiwaanka Gobolka, tanina waa mid ka mid ah noocyadaas.
Xaaladaha kaydinta tufaaxa badankoodu waa isku mid.
Si taxaddar leh u soo ururi miro khudradda ka hor kaydinta, kala sooc, xulashada ugu caafimaad badan.
Tufaax kasta oo la socdo cayayaanka ama boodhka ayaa dib loo dhigaa cuntada maalmaha soo socda ama wax lagu karsado.
Laga soo bilaabo saxarka casiir leh ee tufaaxa waxaad ka heli kartaa casiir cusub oo cajiib ah, iyo wakhti ka dib - cabitaan macaan ama cabitaano kale.
Malamad aad u macaan iyo macaanka ayaa laga sameeyey tufaax noocaan ah, waxay sameeyaan buuxda cajiib ah oo loogu talagalay pies.
Si loogu xafido tufaax habboon oo tufaax ah waa mid aad muhiim u ah si looga ilaaliyo qoyaanka xad dhaafka ah iyo isbedelka heerkulka.
Heerkulka qolka, qolka hoose ama qolka kale waa inuu ahaadaa. ku saabsan heerka darajooyinka, waxay u baahan tahay hawo wanaagsan.
Tufaaxa waxaa lagu kaydiyaa sanduuqyo, alwaaxyo ama sanduuqyo badan, badanaaba waxay isticmaalaan sanduuqyo kartoon leh oo kartoonada leh.
Inta lagu jiro jiilaalka waxaa lagama maarmaan ah marmar si ay u kala soocaan tufaaxa la keydiyay gacanta, waqti si aad u soo saarto dhammaan miraha oo bilaabay inay ka sii daraan.
Baro noocyada xagaaga ee geedaha tufaaxa: Melba, Gorno-Altaisk, Gornist, Papirovka, Robin.
In kasta oo xaqiiqda ah in noocyada triploid ee dhirta tufaaxa ay leeyihiin heerar sare oo is-bacrimin ah, qofku si buuxda uma tiirsanaan karo iskood u sameynta.
Sidaa darteed waxaa lagu talinayaa in lagu beero geedo kale oo tufaax ah oo u dhaw noocyada kala duwan, laba ama in ka badan noocyo diploid.
Qeexida darajada Apple Spas
Waxaad si gooni u tixgelin kartaa sida geedku u egyahay, iyo sida - tufaaxa naftooda.
Geed leh leh taaj weyn, cufan cufan iyo laamood oo ku yaal masaafada dheer.
Dhirta tufaaxa kuwanu waxay leeyihiin jilif jilicsan, caleemo calaamad ah oo caleemo cagaaran ah leh calaamad cagaaran oo ku taal dusha sare iyo petioles, oo leh meel yar oo qallafsan.
Celcelis ahaan, tufaax ballaaran - in ka badan 200 garaam, wareegsan, maqaarka oo saafi ah.
Midabka midabkiisu waa jaalle cagaaran, midabka midabkuna wuxuu u eg yahay jilicsanaan casaan-casaan ah.
Midabkani wuxuu qaadaa qiyaasta nuska ama ka yar.
Muuqaal cadcad oo muuqda.
Jirka waa mid aad u casiir leh, cufnaanta ayaa ah mid dhexdhexaad ah, ma badasho inta lagu jiro kaydinta.
Midabka qashirku waa mid aad u iftiimaya, oo leh jilicis cagaaran oo jilicsan.
Noocyada Homeland - Krasnodar (SKZNIISViV).
Noocyada Waalidka - Geedaha Macdanta Bariiska tetraploid iyo Redfrey.
Baaritaano dheeraad ah, oo ay ku jiraan xulashada geedo, noocyada kala duwan ayaa lagu qabtay Orel iyada oo ku saleysan VNIISPK.
Qorayaasha kala duwan waxay yihiin koox ka mid ah saynisyahanada ay hoggaaminayaan Evgeniya Nikolaevich Sedov.
Tilmaamaha kala duwan ee inta lagu jiro xulashada waa - iska caabin ah qolofwaxa qanjirka Vf gaar u ah.
Magaca noocyada kala duwan ayaa la xiriira iyada oo fasaxii Ortodox-ga Apple badbaadiyeytaas oo ka dhigtay 19-kii August.
Maalintan, midhaha miraha cusub ayaa la quduusay.
Waxaa la rumaysan yahay in ka hor inta aanad qorraxda qorraxdu cuni karin tufaax iyo midho kale.
Baro wax walba oo ku saabsan noocyo kale oo seddex ah oo geedo tufaax ah Augustus.
Diiwaanka Gobolka Central Black Earth Gobolka darajo oo lagu daray 2009.
Kala-duwanaanshaha kala duwan ee badan gobollada kale ee Ruushka, oo ay ku jirto SiberiaWaa mid aad u guuleysatay.
Kala soocid muujiyey caabbinta barafka wanaagsan. Iyada oo ay sabab u tahay in lagu tijaabiyo geedo miro ah 25 digrii ah, yar yar, waxyeello aan la taaban karin oo ku imanaya unugyada iyo burooyinkeeda ayaa la xusay.
Marka la barbardhigo darajada kantaroolka caabbinta barafka ayaa loo aqoonsaday mid sare.
Nooc kala duwan oo Apple ah ayaa lagula talinayaa in ay tahay taranta ballaaran ee bartamaha Russia.
Shaqo dheeraad ah ayaa la qorsheeyay si loo kordhiyo caabbinta dhaxan.
Geeduhu waxay si fiican u bixiyaan wax soo saarka, sidaas darteed Apple ayaa badbaadisay loo aanaynayo noocyada kala duwan.
Waxsoosaarku wuxuu kordho da'da geedaha.
Iyada oo geedo tufaax ah da ' laga bilaabo 7 sano waxaa laga qaadi karaa celcelis ahaan in ka badan 45-50 kg oo miro ah.
Waqtiga beertu waxay ku xiran tahay gobolka, laakiin tani waa inta badan tobanka sano ee labaad ee bisha Agoosto.
Akhri wax ku saabsan noocyada sareeya ee geedaha tufaaxa: macmacaanka Antonovka, Gala, Winter Grushovka, Lyubava, Kuibyshev, gabadhii Pepinchik.
Guul gaar ah ee xulashada noocyo kala duwan ayaa ahaa difaaciisa, taas oo ah, dhamaystiran Xasaasiyad si aad ugu kabto.
Cudurka khatarta ah ee fangasku leeyahay meel kasta wuxuu sababay khasaaro weyn oo ka timid dalagyada miraha laga goostay, gaar ahaan cimilada qoyan iyo qoyan.
Cagaarshowga Vf ayaa mas'uul ka ah difaaca jirka inuu ku dhaco (dhammaan 5 nooc oo la yaqaan) waxaana uu ku jiraa noocyo farabadan oo tufaax ah oo la beeray tobankii sano ee la soo dhaafay, iyo Apple ayaa badbaadisay - oo ay ku jiraan.
Khubarada ayaa ugu yeeraan noocyo tufaax ah oo ka difaaca jidhka: waxay aad u muhiim u yihiin taranta. waxay yareyneysaa baahida loo qabo sunta cayayaanka, waxayna leedahay saameyn aan faa'iido lahayn oo ku habboon deegaanka gobol kasta.
Macmacaanka Apple waxaa sidoo kale lagu magacaabaa noocyada ugu fiican ee beerta cusub ee - beerta cusub.
Sida laga soo xigtay saynisyahan E. N. Sedov, sida beerta waxay ku siisaa dhaqsiyo degdeg ah oo leh maalgelin yar.
In jardiinooyin sida waxaa loogu talagalay in ay isticmaalaan geedo tufaax ah iyo geedaha on rootstocks dwarf, taas oo si fudud u fududaynaya goosashada.
Isku daridda triploid oo leh difaac adag si loo kabo, iyo sidoo kale dulqaadka mira dhalinta oo aad u fiican, ayaa suurtogal u ah in laga hadlo noocyada kala duwan ee Apple ee loo badbaadiyey sidii mid aad u ballaadhan.
Dhirta sare waxaa lagu daraa dhadhan fiican ee casiir leh, karootada, tufaax macaan.
Fiiri fiidiyeyaasha ku saabsan sida loo soo saaro manjooyin guga ee geedka tufaaxa.